Faroole oo Xariga ka jaray Ceelkii shidaal ee ugu horeeyay ee laga qodayo Puntland – SBC
Faroole oo Xariga ka jaray Ceelkii shidaal ee ugu horeeyay ee laga qodayo Puntland
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C.raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa manata xariga ka jaray ceelkii ugu horeeyey ee laga qodayo shidaalka Puntland.
Xaflad ka dhacday Deegaanka daroor ayaa waxa goob joog ahaa wafuud uu horkacayo madaxweynaha, Waxgarad iyo Hay’adaha fulineysa Shidaalbaarista.
Hadalo kala duwan ayaa halkaasi laga soo kala jeediyay waxaana ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr Faroole, Waxaanu sheegay in uu si aad ah ugu faraxsanyahay Horumarka ay Puntland hiigsaneyso iyo ceelkan markii ugu horeysay xariga laga jaray.
Waxa uu siweyn ugu dheeraaday Madaxweynuhu Arimaha ku aadan shidaalka Puntland isagoona sheegay in Puntland iyo Guud ahaan umada Soomaaliyeed ay ka faaiideysan doonaan , isagona soo qaatay hadal ahaa in umada Soomaaliyeed ay mid tahay sidaa owgeed aysan puntland ku dayaneyn maamulo horay u sheegay in ay la soo baxayaan Kheyraad balse ay iyaga keliya ku koobnaan doonto.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha ayaa goob fagaare ah xariga uga jaray Ceelka cusub ee Shidaalka laga qodayo oo sida la sheegay lagu magacaabo Shabeele 1 iyadoona markii ugu horeysay lagu dhuftay birta Riigii qodi lahaa .
Faah faahinno kale iyo weliba Sawiro aan ka soo qaadnay Xafladaasi kaga bogo wararkayaga dambe.